बैङ्कले डोरमेण्ट गर्न पाउँदैन | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण बैङ्कले डोरमेण्ट गर्न पाउँदैन
बैङ्कले डोरमेण्ट गर्न पाउँदैन
बैङ्क व्यवसाय सफल व्यवसायमै गनिन्छ । बैङ्कको काम हो : सेवा दिनु, ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिनु, नाफा पनि आर्जन गर्नु । बैङ्कहरूले नाफा आर्जन गर्न सफल भएकै कारण पैसावाल लगानीकर्ताले बैङ्क स्थापनामा तँछाडमछाड गर्दा ३२ ओटा बैङ्क स्थापना हुन पुगे । बैङ्कको सङ्ख्या बढी भएकाले नियमन गर्न समस्या भएको भन्दै बैङ्क सङ्ख्या घटाउने उद्देश्यका साथ ८ अर्ब चुक्तापूँजी पुर्‍याउनुपर्ने नीति लिइयो । चुक्तापूँजीको नीति लिइएपछि केही बैङ्क मर्ज भए र अहिले २८ ओटा बैङ्क अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । नियामक निकायले सोचजस्तो गरी बैङ्कहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य कमी नआएका कारण अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिग मर्जको सोचाइ लिएको चर्चा चलेको छ । राष्ट्र बैङ्कले भविष्यमा १० देखि १२ ओटा मात्र बैङ्क रहने अनुमान गरी बिग मर्जरको कुरा उठाएको हो भन्ने धेरैको भनाइ छ । सीमित बैङ्क मात्र रहनाले अनुगमन गर्न सजिलो हुने राष्ट्र बैङ्कको सोचाइ रहेको पाइन्छ । साथै, यथेष्ट चुक्तापूँजी भएको बैङ्क भएमा लगानी गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै विश्वास गर्ने बलियो आधार तयार हुन्छ । यथेष्ट चुक्तापूँजी भएको बैङ्क भएमा सानोतिनो हुरीले ढाल्न सक्दैन र लाभांश बाँड्न कमी हुने विश्वास गरिन्छ ।
अहिले बुझ्न नसकिने अचम्मको कुरा देख्नमा र सुन्नमा आइरहेको पाइन्छ । त्यो हो, विभिन्न बैङ्कको मर्ज भएको र विलीन भएर एकीकृत कारोबार हुने दिनको शुभारम्भ कार्यक्रममा उद्घाटन भएको सिलसिलामा हरेक बैङ्कको कार्यक्रम मन्तव्यमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले बैङ्कले नाफा कमाउनु हुँदैन, सुरक्षित लगानी मात्र गरिनुपर्छ, त्यो पनि तोकिएको सेक्टरमा भनेर मन्तव्य व्यक्त गरेको पाइन्छ । उनले बैङ्कहरूलाई नाफा कमाउने हो भने बैङ्कमा लगानी छोडेर उद्योग व्यापारतिर लाग्नुस् भन्ने कडा सुझाव दिइएको पाइन्छ । गभर्नरको यो भनाइले बैङ्किङ क्षेत्रमा तरङ्ग नै ल्याएको छ । नाफा कमाउन नहुने हो भने बैङ्कमा नै लगानी किन गर्ने ? बैङ्क खोल्न किन चासो दिने आदि अनेक प्रश्न खडा हुन्छ । नाफा लिन नपाइने भए निजीक्षेत्रले किन लगानी गर्छ । सरकारी बैङ्कहरू पनि नाफाकै लागि काम गर्छन् । यस्तोमा गभर्नरको यो भनाइ किन आएको हो, यसले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ ।
आजसम्म बैङ्कको शेयरतिर सबैको ध्यान आकृष्ट हुनुको कारण बैङ्कले अटुट रूपमा प्रतिफल दिन्छ भन्ने हो । अरू कम्पनीको दाँजोमा धेरै प्रतिफल दिने कारणले नै बैङ्कको शेयर भाउ पनि अन्य कम्पनीको भन्दा उच्च देखिन्छ । प्रतिफल कम दिने अवस्थामा लगानीकर्ताको चासो घट्दै जानु स्वाभाविक हुन्छ । प्रतिफल कम हुने भएपछि उनीहरूले शेयरमा लगानी गर्दैनन् र नेप्से घट्दै जानु स्वाभाविक हुनजान्छ । नेपालको शेयरबजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या अधिक छ । यस्तोमा नेप्सेको घट्ने बढ्ने कामको नेतृत्व बैङ्कहरूले लिएको अवस्था छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले एउटा ठाडो आदेश दिएको पनि पाइयो । बैङ्कहरूले ऋणीहरूबाट लिँदै आएको ब्याज घटाऊ, नत्र प्रहरीहरूले गर्ने जस्तो छुद्र गर्नु नपरोस् । यसमा बैङ्कहरूले प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्, ऋणीहरूको ब्याज घटाउन सकिँदैन । तत्कालीन अवस्थामा बैङ्क र ऋणीबीच समझदारीमा हस्ताक्षर भइसकेपछि तिरिरहेको ब्याजलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ र भनेर बैङ्कहरूले जवाफ दिइसकेका छन् । बैङ्कले मुद्दती हिसाबमा दिएको ब्याजमा ५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी स्प्रेड दरमा ऋण दिने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क तोकेकै आधारमा यसरी ऋणीबाट ब्याज लिने गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले तानाशाह शैलीमा हुकुम दिएको नसुहाएको अर्थक्षेत्रमा चर्चा चलेको छ ।
अचेल बैङ्किङ कारोबारको सिलसिलामा बैङ्कका सेवाग्राही धेरै पीडित भइरहेका छन् । बैङ्कहरू पीडितको गुनासा सुन्न चाहिरहेका छैनन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक नागरिकको बैङ्क खाता खोल्ने उद्घोष गरेको छ । वित्तीय पारदर्शिता वृद्धि गर्न सबै आर्थिक कारोबार बैङ्कमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सो कार्यक्रम ल्याएको जनाइएको छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ, किनभने बैङ्कहरू सेवाग्राही लक्षित छैनन् । बैङ्कहरू कानून मान्दैनन् । कानून नमानेको कुरा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालै पाउँदैन । सेवाग्राहीलाई दुःख दिएको थाहा पाएर पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क बार्दलीमा बसेर तमासा हेर्ने गर्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै एकजना बैङ्कको खातावालले कसैलाई चेकमार्फत भुक्तानी दिएर लामो समयका लागि विदेश प्रस्थान गर्छ र चेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले बैङ्कमा भुक्तानी माग्न जान्छ । बैङ्कले खाता डोरमेण्ट छ भनेर चेक फर्काउँछ । यसरी चेक प्राप्त गर्ने व्यक्ति पीडित बन्छ । पीडक बैङ्कलाई नै मान्नुपर्छ किनभने चेक विधिपूर्वक काटिएको छ । चेक दिने व्यक्तिले सबै नियम पु¥याएको देखिन्छ तर चेक साट्न बैङ्क मान्दैन । बैङ्कको तर्क हुन्छ : ६ महीना सञ्चालनमा नआएको खाता बन्द हुन्छ । अब प्रश्न आउँछ खाता डोरमेण्ट कसले गरेको हो त ? खाता बन्द गर्ने काम बैङ्कले गरेको हो । डोरमेण्ट भएको सूचना लिखित वा मौखिक रूपमा खातावाललाई दिइएको हुँदैन । खाता खोल्दा उक्त ६ महीनामा आफै बन्द हुने शर्त राखिएको पनि हुँदैन । यस्तो अवस्थामा बैङ्कले जबर्जस्ती ग्राहकको खाता आफूखुशी बन्द गर्न पाउँछ ?
विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा २ र १६ अनुसार ड्रअरको पर्याप्त निक्षेप भएको अवस्थामा प्रस्तुत भएको चेक रीतपूर्वक छ भने त्यस्तो चेकको भुक्तानी बैङ्कले दिनैपर्ने हुन्छ । त्यस्तो चोक भुक्तानी नदिएबाट ड्रअर वा रीतपूर्वकको धारकलाई कुनै हानिनोक्सानी भएमा बैङ्कले त्यसको क्षतिपूर्ति यो ऐनबमोजिम दिनुपर्नेछ । यसरी चेक भुक्तानी सम्बन्धमा स्पष्ट ऐन हुँदाहुँदै बैङ्कहरू सेवाग्राहीलाई दुःख दिने नियतले चेक भुक्तानी दिँदैनन् र डोरमेण्ट शब्द प्रयोग गर्छन् । यो डोरमेण्ट कार्य ऐनविपरीत छ । यस्तोमा बैङ्किङ कारोबार व्यापक बढाउने र हरेक नेपालीलाई खाता खोलाउने योजना कसरी सम्भव हुन्छ र सफलता प्राप्त हुन्छ ? यसमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ नेपालमा लागू छ भनेर किन जानकारी राख्दैन र बैङ्कहरूले ऐन नाघेर दुःख दिएकोलाई बार्दलीमा बसेर किन टुलुटुलु हेरेर बस्छ बुझ्न सकिँदैन ।
चेक कारोबारलाई सहज पार्न, विश्वासयोग्य बनाउन विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ लाई सबै बैङ्कलाई वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई पनि उपहार पठाउन जरुरी देखिएको छ । सम्पूर्ण खातावाल सेवाग्राही यो चाहन्छन् कि सम्बन्धित खातावालकै अनुरोधमा मात्रै डोरमेण्ट गरियोस् । बचत खाताको अर्थ आफूलाई चाहिएको बेला मात्र रकम निकाल्ने हो, न कि बैङ्कको निर्देशन अनुसार हरेक ६ महीनामा रकम निकाल्नु । आवश्यक छैन भने किन रकम निकाल्ने ? हरेक ६ महीनामा बैङ्कमा हाजिरी जनाएर विशेष फाराम भर्नुपर्ने दुःख किन ? बैङ्कको इच्छामा विशेष कारण नदेखाई रकम निकाल्न रोक किन ? यसरी बैङ्कहरूले आफूखुशी डोरमेण्ट गरिदिँदा चेक भुक्तानी प्रणालीप्रति नै अविश्वास सृजना हुनजाने अवस्था रहन्छ ।